नरुनु छविनाथ सर, आँसु पुछ्नु !
छविनाथ सर आज रोइरहनु भएको छ । उहाँको आत्मा रोइरहेको छ । ‘बाबु तिमी पत्रकार मान्छे यो कुरा चाहिँ नलेख्नु है !’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किनभने हामीले भोलि पनि यही समाजमा मिलेर बाँच्नु छ ।’ के हो यो ? मैले इनरुवा छोड्नुभन्दा अघिसम्म त उहाँले मसँग कहिल्यै यस्ता कुरा गर्नुभएको थिएन । यो दस वर्षमा, यो...
इटहरीः दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनलाई लिएर सवैको ध्यान एक मात्र महानगरपालिका पछि इटहरी उपमहानगरपालीकामा केन्द्रित हुँदैछ । छोटो समयमा आफ्नो विकास गर्न सफल इटहरीले पुरानो शहर विराटनगर र साँस्कृतिक शहर धरानलाई पछि पार्दै एक नम्बर प्रदेशको राजधानी दावी गर्दै छ । यहाँका राजनितिक दलहरुले पनि यस्तै साझा एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । दलहरु...
काठमाडौँसहित अन्य ठूला सहरका गल्लीगल्लीमा, मैले देखेको र नदेखेका सानातिना सहरहरुमा, अझ भनौँ झन्डैझन्डै प्रत्येक औषधि पसलमा र एउटा मात्रै डाक्टर कहिलेकाहीँ पुग्ने हरेक क्लिनिकमा ‘प्रयोगशाला’ भेट्न सकिन्छ। सबैमा नभए पनि कतिपयमा बोर्ड या भित्तामै लेखिएको देख्न सकिन्छ ‘फलानो प्याथोलोजी...यहाँ रगत, दिशा, पिसाब, खकार, वीर्य आदि जाँच गरिन्छ।’ प्याथोलोलिस्टले कहिले पाइला नटेकेका यस्ता ‘प्याथोलोजी’ले प्याथोलोलिस्टको...
महिला हिंसामा राजनीतिक संरक्षण
नारीअधिकार , बालअधिकार प्राप्त र लागु गर्न कठीन र मुस्किल छ । दिनहुँ बालिकाहरु बलात्कार हुँदै मारिएका छन ,अनि राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ । अचम्म त त्यती बेला लाग्छ जब देशका ठुला मिडियाहरु घटनालाई अतिरञ्जित पार्न खोज्दछन् , माडी घटना यसको प्रमाण हो । कान्तिपुर जस्तो ब्रान्ड मिडियाले बलात्कार पुष्टि नभएको समाचार जुन...
यो साता इटहरीमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको नाम हो हेमकर्ण पौडेल । इटहरी उपमहानगरपालीकाका काङ्ग्रेस सभापति तथा मेयर पदका आकांक्षी हेमकर्ण पार्टीबाट टिकट नपाउँदा सबै भन्दा धेरै चर्चित भए । टिकट नपाउँदा उनले हजारौ कार्यकर्ताको माया पाउँने हेमकर्ण राजनितिक रुपमा उदायका छन । पूर्वी नेपालको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको इटहरीले सबै पार्टीको नजर तानेको छ । हो...
भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले जनतन्त्रको चीरहरण ग¥यो । निर्वाचनमा हार्ने अवस्था देखेर माओवादीका मतगणक प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते । मतपत्र जनताको मत अभिमत हो । मतपत्र च्यात्नु जनमतको उपेक्षा र अपमान मात्र जनाताकै घोर उपेक्षा हो । जनताको अपमान गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सम्मान गरेको किमार्थ ठहर्दैन । जनता कुनै पनि...
हरेक मानिसलाई पुरस्कारले हौसला दिन्छ र दण्डले दुःख । मानव सभ्यताको इतिहासका प्रत्येक सन्दर्भमा त्यो पढिएको, देखिएको र भोगिएको छ । संसारमा हरेक क्षेत्रमा नामी र दामी पुरस्कारका व्यवस्था भएका छन् । संसार प्रसिद्ध ‘सिएनएन हिरो’को पुरस्कार नेपालकै प्रख्यात समाजसेवी अनुराधा कोइराला र पुष्पा बस्नेतले पाए । अझ पुष्षा बस्नेतले त ‘सिएनएन सुपर हिरो’ को...
काठमाडौं : राजा वीरेन्द्र सहित उनको परिवारको हत्या भएको १५ वर्ष बितेको छ । विश्वलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी भएको यो हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा क्रुर दरबार हत्याकाण्डका नामले परिचित छ । रहस्यमय ढंगबाट २५ हजार सेनाको सुरक्षा घेराभित्र गराइएको यो हत्याकाण्ड पछाडि आखिर कसको हात थियो र किन हत्या नै गराउनुप¥यो भन्ने जिज्ञासा आज पनि...
धुम्रपान यसलाई घृणा गरौ ( सन्दर्भ – विश्व धुमपान बिरुद्धको दिवस )
परिचय , चुरो६, बिं८ी, सिगार, हुक्का, कक्क८ र सुर्ती सेवनलाई धुमपान भनिन्५ । धुमपान एक प्रकारको दुव्र्यसन हो । धुमपानजन्य उत्पादनहरु प्रायशः सुर्तीबा६ बनेका हुन्५न् । सुर्तीको प्रयोग मुख्यतया दुई किसिमबा६ भएको पाइन्५ । धुंवाको रुपमा जस्तैः चुरो६, तमाखु, कक्क८, हुक्का, बिं८ी र चपाउने रुपमा सुर्ती, खैनी, जर्दा, मधु, पान आदि । धुमपानको स्थिति विश्वमा...
निर्वाचनको ज्वरो अझै सकिएको छैन । यो थामिन २०७४ असार पूरै बित्न सक्छ । अहिले बजेट, सरकार गठन र भद्र सहमतिका कुरा आएका छन् । प्रचण्डले आफू हारेर पनि देशलाई जिताए । एक किसिमको निकास चुनाव पनि हो । चुनावले समाजमा जमेर बसेको दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, बाहुबली र कामचोर प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्नु पर्ने त...
पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै जोडिएर दोश्रो चरणका बारेमा सञ्चार माध्यम, अनलाइन, पत्रपत्रिका, फेसबुक, ट्विटर मात्र नभई चोक, चिया पाटी, प्रायः जमघट निर्वाचनमय नै बनेको छ । बीस वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशासँगै ग्रामीण जनतामा उत्साह बढेको पाइन्छ । मत परिणामका व्याख्या र अनुमान उत्तिकै भइरहेकै छन् । स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्दै ‘आफ्नो गाउँ,...
भारतप्रति नेपाली जनताको पहिलेको जस्तो सम्मान र सद्भाव छैन : बरिष्ठ भारतीय पत्रकार
नयाँ दिल्ली / मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको घाउ अझै पुरिएको छैन । यो तथ्य एक भारतीय पत्रकारले हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको अनुभूतिबाट उजागर भएको हो । नेपाल भ्रमणमा आएका ती भारतीय पत्रकारले आफ्नो लेखमा भारत र भारतीयप्रति नेपालमा अब पहिलाजस्तो सम्मान, सद्भाव र स्नेह नरहेको अनुभव उजागर गरेका हुन् ।...
कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता : राजनीतिको उल्टो यात्रा
हरेक मानिस र संस्थाले गर्ने कामका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हुन्छन् । व्यक्ति, संस्था र अधिकार प्राप्त निकायले विधि, ऐनकानुन र संसारका सर्वमान्य सिद्धान्तका शासन अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग सर्वत्र उठ्न थालेका अवस्थामा भने नेपालको वर्तमान सरकार जनस्तरमा समेत आलोच्य हुने सवालमा एकपछि अर्को गर्दै देश...
न्यायालय स्वतन्त्रताको मन्दिर हो । प्रधानन्यायाधिस माथि लगाइएको महाअभियोग कार्यले संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च आयुक्तदेखि विश्वको ध्यान खिचिरहेका खबर आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले संसदमा विचाराधिन सो महाअभियोग प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको छ । अलिकति पनि नसोची आवेसमा आएर सत्तारूढ संसदहरूको राजनैतिक आग्रहको व्यवहारले विश्व समुदायको ध्यान खिचिरहेको छ । नेपालका लागि...
हाम्ले खोज्या कस्तो स्थानीय तह हो ֍
‘नेपाल’ साप्ताहिकका पत्रकार माधव बस्नेत फेसबुकमा स्टाटस लेख्न माहिर मानिन्छन् । गत बिहीबार उनले स्टाटसमा लेखे –‘२०५१ मा नेकपा (माओवादी), २०७४ सालमा नेकापा (माओवादी), सिर्फ शेरबहादुर–प्रचण्डको लालचा पूरा गर्ने बन्धन, नेता–कार्यकर्ताका निधारमा खरानी चन्दन ।’ लोकतन्त्रको बाटो घुमाउरो भए पनि त्यो अन्ततोगत्वा आम जनताका लागि जीवनयापनका लागि सजिलो बाटो हुनु पर्ने हो । स्थानीय चुनावका...
दुई दशक पछि अर्थात वि.स. २०७४ साल बैशाख ३१ गतेका हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले नागरिकहरुमा एक प्रकारको खुसीयाली ल्याएको छ । निकै उत्साहपूर्ण रुपमा आफ्नो अमुल्य मतदान गरी हाम्रो भन्दा राम्रो ब्यक्तिलाई जनप्रतिनिधीको रुपमा विजय गराउँदै छन । माओवादीले चलाएको दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धपछि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको थिएन । यति...
संसारमा यस्ता व्यक्ति पनि जनमिन्छन्, जसले कहिले पनि आफ्नो नैतिकता, इमानदारिता र धैर्यतालाई गुमाउँदैनन् । कहिल्यै पनि लोभ लालचमा पर्दैनन् ।अरुको सम्पत्तिमा आँखा लगाउँदैनन् अनि देश र समाज सेवा उनीहरुको रगतमै बगेको हुन्छ । यस्ता इमानदार र कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई समाजका सबै वर्गले चिन्न र बुझ्न सकेका हुँदैनन् । कसैकसैका त सकारात्मक पक्ष यति बलियो हुन्छ...
युवाको हातमा देशको भविष्य
२०५४ सालमा जन्मेको बालक अहिले २० वर्षे युवा बनेको छ । त्यति बेला स्थानीय निकायमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरू अहिले ४५ देखि ६० वर्ष नाघेका छन् । यो उमेरको अन्तरालमा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएको छ । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने युवाहरूको लामो पङ्क्ति अहिले नेपालका राजनीतिक दलका सङ्गठित, क्रियाशील राजनीतिमा स्थापित भएका छन्...
बिचौलिया र स्थानीय निकायको निर्वाचन
प्रजातन्त्र,बहुदल,पञ्चायी व्यवस्था,संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रको शासन समेत नेपालले भोगिसके पश्चात् नेपालमा लोकतन्त्रको बहाली भएर पहिलोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन गइरहेको छ पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर मिति नसरेको खण्डमा।दुई दशक हुनै लागिसकेको थियो नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको पनि।यश निर्वाचनको अागमन र रौनकले नागरिक स्तरमा एक प्रकारको उत्साह र उमंग थपेको छ। देशका प्रमुख...
के न्यायपालिका संविधान भन्दा पनि माथि छ ֍
सरकारका ३ अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ-आफ्नो अधिकार, शक्ति र क्षेत्राधिकार संविधानत तोकिएको हुन्छ । व्यवस्थापिकाको काम कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम कानुनको व्याख्या, परिभाषा गर्नु हो । कुनै एउटामात्रै अंगलाई धेरै अधिकार र शक्ति दिँदा उक्त अंग अधिनायक र स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहेको हुँदा यसरी ३ बेग्ला-बेग्लै...
यो पुरुषवादी चुनाव : महिला दोस्रो पदमा सिमित
काठमाडौँ महा नगरपालिकामा विवेकशील नेपालीका तर्फबाट रञ्जु दर्सना र भरतपुर महा नगरपालिकाबाट प्रचण्ड पुत्री रेणु दहाललाई छाडेर ३, ४ र ६ मा १९ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनका अधिकांश उमेदवारहरू मेयरमा पुरुषै तोकिए । यसरी तोकिएका उम्मेदवारहरूमा एमाले र राप्रपामा चुनावी तालमेल भएकाले दुवै दलले मेयर र उपमेयरमा पुरुषलाई तोकी महिलालाई झुक्याउने काम गरेका छन्...
मेरो देश हराएको होइन, नेताहरु चाहिँ हराएका हुन !
यति बेला नेपाली भाषी भूटानीहरुको कथा वस्तुमा निर्माण गरिएका नेपाली चलचित्र मध्ये धेरै चर्चा र सबैले प्रतिक्षा गरिरहेका चलचित्र हो ”देश खोज्दै जाँदा’’ भनेर लेख्दा मैले त्यस्तो ठुलो गलत लेखे जस्तो लाग्दैन । चलचित्रको प्रचारबाजी कति धेरै छ भन्ने कुरा मलाई मात्र होइन, लगभग सबैलाई थाहा भैसकेको छ ! अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायत देशको विभिन्न राज्यहरुमा...
किन हुदैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षा
स्वास्थ्य सेवा मानव जीवनमा महत्वपूर्ण कुरा हो । स्वास्थ्य क्षेत्र शान्तिपूर्ण रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकुन भन्ने पनि सवैको चाहाना हुन्छ । अस्पतालले जहिले पनि कुनै पनि विरामी आकस्मिक कक्षमा आउनसाथ निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि अस्पताललाई विरामीको भावना विपरित काम गर्यो भनेर विरामी पक्षबाट लगाइने झुटा आरोपबाट केवल डाक्टर तथा समग्र...
बढ्दाे विद्युतीय जोखिम, पाँच वर्षमा ४७ को मृत्यु
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका इकाइमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय दुर्घटनामा हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार २०६८ असारदेखि २०७३ चैतसम्म ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा पोखरामा नौ जना, बुटवलमा १४, विराटनगरमा १०, जनकपुरमा १९ र अत्तरियामा आठ...
निधी र थापाका कारण प्रचण्डलाई ज्वरो : एमाले र मधेसी मोर्चाका कारण प्रचण्डको निन्द्रा चैट
स्थानीय निकायको निर्वाचन जति नजिकिदै छ, त्यती नै सरकार भित्र भने खटपट भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उपप्रधानमन्त्रीको बरियता मिलाउन र चुनावको मुखैमा नेपाल प्रहरी नेतृत्व बिहिन बन्दा झन् सकस परिरहेको छ । नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा गत साउन १९ गते निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त...
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मापदण्ड आवश्यक
स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन वैशाख १६ गते तोकिएको छ यो दिन आउन अब २० दिन मात्र बाकी रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति जति नजिकिँदैछ, देशको राजनीतिले एउटा नयाँ गती लिएको छ । जनप्रतिनिधि कस्लाई बनाउने भन्ने बिषयमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरु निरन्तर लागि परिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा...
नेपालमा किन माओवादीपार्टी जन्मीएको होला किन युद्धको बाटो अपनाएको होला भन्नेहरु पहिले पहिले धरै भटिन्थे , आम मानिसको यस्तो गुनासोहरु गरेको मैले प्रत्यक्ष सुनेका पनि छु । जब माओवादी गाँउ ,बस्ती , शहरबाट दिन दुई गुणा रात चौ गुणाले वृद्धिहुदै गयो र हिंसात्मक युद्धको बाटो अपनाउदै पनि गयो, सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट धेरैले सहादत...
ठूला पार्टी रोज्ने कि नयाँ विकल्प खोज्ने ֍
मौसममा फेरबदल आएको छ । मौसमको गति हेर्दा दिनैपिच्छे आउने असिना पानी र झरीले बर्खालाई सम्झाएको छ । उच्च हिमाली भेग र उपत्यकामा जाडो नै विदा नभैसकेको अवस्था देखिन्छ । एकाएक भएको मौसमको यो फेर बदलसँगै मुलुक चुनावी रन्कोमा तातिइसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भए पछिको पहिलो हुनै लागेको यो स्थानीय तह चुनावले मुलुकको...
बदलिदो परिस्थितिमा मानव अधिकार रक्षकका सवालहरु
लम्बिदो राजनितिक अस्थिरतासंगै कानुन कार्यन्वयनमा देखिएका जटिलताहरु थप गाठो पर्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा सैदान्तिक रुपमा मानव अधिकारका सवालमा सबै पक्षहरु गम्भिर रहेको देखिएता पनि व्यवहारत त्यस्तो देखिदैन । आफ्नो अधिकारको वकालत गर्ने आन्दोलनरत पक्षहरु मात्र होइन मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा परिपालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राज्यका संयन्त्रहरुले समेत जनतका अधिकार माथि समय समयमा धावा...
संविधान संशोधन नभई चुनावै हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडानलाई लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएको देश लाई निकाश दिन सरकारले स्थानिय तह निर्बाचन को घोषणा गर्यो । लामो समय देखि हुन नसकेको स्थानिय तहको निर्बाचन को मिति घोषणा भएको दिन देखि नै जनता आफुले रोजेको जनप्रतिनिधि छान्न पाइने हुँदा उत्साहित छन । देश नयाँ संविधान अनुसार संघियतामा...
लोड-सेडिंग हटदैमा देश बन्ला र ֍
लोड-सेडिंग हट्नु मात्र बिकाश हुनु होइन, लोड-सेडिंग हट्दा देश बिकास गर्न सजिलो हुने मात्र हो । किनकी बिद्युत बिना कुनै पनि उद्योग र कलकारखानाहरु सञ्चालन हुन सक्दैनन । गाउ र सहरमा २४ घण्टा बत्ति बालेर मात्र देश धनि हुने हो र ? बत्ति दिदैमा सरकारको राज्य र जनता प्रतिको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ र ? अनि सिक्षा...
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ।यसलाई अब कसरी सफल बनाउने भनेर राजनीति दल र सरकारको संवैधानिक निकायहरू तथा प्रशासनिक निकाय पनि सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेका छन।नागरिकहरूमा पनि बडो उत्साह थपिएको छ।१९ वर्ष पछि हुन लागेको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले एकपटक कायापलट ल्याउनुको साथै सदाको लागि देशले विकासको मुहार फेर्ने छ भनेर अाशा गर्ने...
हामी सधैँ दलित नै हुने ֍
‘कोही भन्छन् दलित एउटा सिङ्गो व्यथा हो । कोही भन्छन् दलित आफैंमा अल्झिएको गाथा हो । तर, मेरो भनाइमा दलित एउटा तिरस्कृत व्यक्तिको कथा हो ।’ ‘दलित के हो ?’ शीर्षकमा २०४४ जेठ ८ गते मैले यस्तो मुक्तक लेखेको रहेंछु । त्यो बेला अलिअलि लेख्न जान्नेले केही न केही उपनाम राख्ने चलन थियो । सम्भवतः...
वीर सपुत गौतम : नेता र राजनेता
कुरा बि.स २०१६ असार १५ गतेको हो । चिनको जनमुक्ति सेनाले नेपालको मुस्ताड भञ्जयाड क्षेत्रमा आइ तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्रिय नेपालमा रहेका तिब्बती सरणार्थीहरुलाई दमन गर्न गोली चलाउदा भुलले नेपाली सेनाका सिपाही बम प्रसाद बास्तोलालाई २८ जुन सन १९६० का दिन गोली लागी मृत्यु भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बिश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले उक्त घटनाको बिरोध...
प्रिय रबिन्द्र, म तिमीलाई ब्याक्तिगत रुपमा त चिन्दिन तर सम्बृद्ध नेपाल निर्माणको लागि तिमीले गरेका अथक प्रयास र प्रयत्नहरुलाई नजिक बाट नियाली रहेको छु । तिम्रो बिचार, आदर्श, निष्ठा र सिद्धान्त संग पहिले देखिनै म र सम्बृद्ध नेपाल चाहने हजारौ युवाहरु चिरपरिचित छौ । तिमी बि बि सी छोडेर राजनीतिमा गएको खबरले मरुभूमिमा आफ्नो श्रम, जवानी...
विद्यार्थी जीवन, राजनीति र बेरोजगारको हीनताबोध
कर्मयोगी युवा शक्तिले जिउँदो लासको संज्ञा भिरेर बस्न चाहँदैन । त्यसमा पनि पाएसम्म मातृभूमिको सौन्दर्यमा परिवारसँग पाखुरी साट्दै पौरख पोख्ने अभिलाषा तमाम नेपाली युवामा नहुने हुँदै होइन । इलमको जोहो र टुङ्गो नहुँदा आज हजारौँ शिक्षित बेरोजगारीमा मानसिक तनाबले डेरा जमाउन थालेका पीडा हाबी बन्दै गइरहेका छन् । शिक्षितवर्गहरुका आफ्नै वेदना छन् । रोजगारीको खोजीमा...
मेरो घरठेगाना कहाँ हो सरकार ֍
पोहोरसाल भारतको तीर्थयात्राको सिल्सिलामा उडिसाको जगन्नाथधाम पुगेको थिएँ । त्यहाँ रहेको नेपाली धर्मशालामा पुग्ने तीर्थयात्रीको विवरण राखिँदो रहेछ । हाम्रा हजुरबा १९८७ सालतिर त्यहाँ पुग्नुभएको कथा मैले सानामा उहाँकै मुखबाट सुनेको थिएँ । त्यहाँको कर्मचारीलाई भनेँ– ‘मेरा हजुरबा १९८७ सालतिर यहाँ आएको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको रेकर्ड हेर्न सकिएला ?’ ‘मजाले सकिन्छ नि, किन नसक्नु...
संसारमा सबै किसिमका अध्ययन हुने विश्वविद्यालय खुलेका छन् तर प्रेमको विश्वविद्यालय भने अझसम्म खुलेको छैन । अहिले हाइफाईयुक्त संसार छ । त्यसैले वाईफाईको जमाना आएको छ । वाइफाई नभएको अड्डाअदालत, संघसंस्था र घर नहुने कोही छैनन् । विकसित जमानाले मानिसलाई अझ उदात्त बनाएको छ । प्रविधिले प्रेमका सम्बन्धमा समेत युनिक विशेषताहरू थपेको छ । प्र्रेम...
सन्दर्भःअन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश
मेरो ९० बर्ष पुग्नु भएको ससुराबुवाले भन्नुभयो – महिलाको अधिकार भनेको के हो ? के हुँदाअधिकार प्राप्त हुन्छमेरो ? के चाहिएर के ले नपुगेर महिलाहरु सडकमा नारा र्याली गर्दै हिडछन् ? वहाँको बिचारमामहिला सर्बअधिकार सम्पन्न छन् । अर्काकी छोरी घरमाभित्र्याएर आफ्नो घरको ढिकुटी, भान्सा, सम्पत्ती, परिवार जस्ता त्यस परिवारको सम्पूर्ण कुराको मालिक्नीतथा हिस्सेदार बनाइन्छ ।...
समयको परिवर्तन सँगसँगै मान्छेका सोच, विचार, चिन्तन र जीवनशैलीमा हुँदै गइरहेको परिवर्तनको सत्यलाई नकार्न सकिँदैन । एक्काइसौँ शताब्दीलाई समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो समाज र राष्ट्रमा पहिलेको तुलनामा आकाश र जमिनको फरक आएको छ । इतिहासलाई फेरि स्मरण गरेर हेर्दा हामी ढुङ्गे युगबाट बल्ल मात्र मान्छे भएका हौंँ भन्ने अनुभूति हुँदाहुँदै पनि पहिलेको समाज र...